ဝယ်သူနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ဖို့ - Better Version
August 17, 2020 2021-07-14 19:44
ကိုယ့်ဖောက်သည်တွေ ဝယ်သူတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ အရောင်းသမားအတွက် အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တစ်ခုပါ။
ဝယ်သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု relationship တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ရင် ဝယ်သူရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ လိုအင်တွေကို သေချာလေ့လာနိုင်မယ်။
ဒီလို ဝယ်သူရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ လိုအင်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့အခါ ဝန်ဆောင်မှုကို ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ်။ အဲ့ဒီအခါ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါဝယ်တဲ့ ဝယ်သူကနေ အမြဲတမ်း ဖောက်သည်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာဝယ်ဖို့ သူများတွေကို တစ်ဆင့် ပြန်ညွှန်းပေးတာတွေ ရှိလာနိုင်တယ်။ ဒီတော့ ရှေရှည်မှာ ပိုကောင်းတဲ့ ရလာဒ်တွေ ဖန်တီးနိုင်မယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒီလို ဝယ်သူတွေ၊ ဖောက်သည်တွေနဲ့ relationship ကောင်းကောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် ဘာတွေ လိုအပ်မလဲ? ဘာတွေ သိထားဖို့လိုမလဲ?
ကိုယ့်ဝယ်သူနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့ လုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေ၊ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
၁) Communicate လုပ်ပါ။
Communication လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောက တစ်ဖက်က ပြောတာကို နားထောင်ရမယ်။ ပြီးရင် ပြန်ပြီး ပြောဆိုရမယ်။ ဝယ်သူပြောတာကို နားမထောင်ပဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဇွတ်ပြောနေတာက communication မဟုတ်ပါဘူး၊ relationship ကောင်းကောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့် ပစ္စည်းကို ရောင်းဖို့ပဲ မဟုတ်ပဲ ဝယ်သူပြောတာကို နားထောင်ရမယ်။ ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ရပါမယ် Rapport building ပေါ့။ ဒါမှ ဝယ်သူရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ လိုအင်တွေကို သိမယ်။ ဒီပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါဟာ ဝယ်သူနဲ့ relationship တည်ဆောက်တဲ့အခါ အရေးကြီးဆုံးပါဘဲ။
၂) ဝန်ဆောင်မှုကောင်းပါစေ။ အလွန်အကျွံတော့ ကတိမပေးမိပါစေနဲ့။
ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ကတိတွေ အလွန်အကျွံမပေးမိပါစေနဲ့။ ဝယ်သူကို မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားတွေ ပေးထားပြီး ပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ဝယ်သူရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဟာ ဝယ်သူအတွက်လည်း မကောင်းသလို ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်လည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လည်း အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါတယ်။
“ဘယ်အချိန်မှန်း မသိဘဲ စောင့်ဆိုင်းရတာဟာ အချိန်အတိအကျသိပြီး စောင့်ဆိုင်းရတာထက် ပိုကြာတယ်။”
အရောင်းသမားတွေအနေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝယ်သူလိုအပ်ချက်ကို ချက်ချင်း မဖြည့်ဆည်းနိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲလို ဖြစ်လာလို့ စောင့်ဖို့ ပြောတဲ့အခါ “မကြာခင်” ပြန်ပြောပေးပါမယ်ဆိုတာမျိုး မပြောမိဖို့ လိုပါတယ်။ ချက်ချင်း ပြန်မပြောနိုင်သေးဘူး၊ လုပ်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်အချိန်တော့ ရမယ်ဆိုတာမျိုး တိတိကျကျ ပြောပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှု ရယူပါ။
၄) Feedback တောင်းပါ။
ကိုယ်က ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်သူလက်ထဲ ထည့်ပြီးတဲ့အခါ အမြဲ feedback ပြန်တောင်းပါ။ ပြီးရင် ဒီ feedback ပေါ်မူတည်ပြီး ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ပေးနိုင်အောင် လုပ်ပါ။ ဒီလိုတောင်းပြီးတဲ့အခါလည်း သူတို့ရဲ့ feedback တွေ စကားသံတွေက ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါကြောင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ feedback တွေကို အလေးထားကြောင်းပြပါ။ feedback မှာ ကောင်းတာလည်း ရှိသလို၊ ဆိုးတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီ complaints တွေ ကြုံလာတဲ့အခါလည်း အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်စွာနဲ့ ကောင်းကောင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ကိုယ့်ဝယ်သူကို အမြဲဖုန်းဆက်နေရမယ် မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် ဖောက်သည်တွေ၊ ဝယ်သူတွေနဲ့ အဆက်သွယ်မပြတ်နေပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေ ထွက်လို့ အကြောင်းကြားပေးတာမျိုး၊ ကိုယ့် industry နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သတင်းထူးတွေ ရှိရင် email နဲ့ information ပေး ပေးတာမျိုး၊ blog အသစ်တွေ ပို့ပေးတာမျိုး လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ ဖောက်သည်တွေ အဆက်သွယ်မပြတ်နေဖို့ဆိုတာ မခက်ပါဘူး။ တစ်လမှာ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါလောက်တော့ connect လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်တာဟာ ကိုယ့်ဝယ်သူကို အမြဲ စိတ်ထဲမှာ ရှိကြောင်းခံစားရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရှုပ်ရလောက်အောင်မျိုးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
အသိအမှတ်ပြုခံရတာကို လူတိုင်းကြိုက်ကြပါတယ်။ကိုယ့်ကို ဆက်သွယ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း မှတ်မိသွားတာမျိုးကိုလည်း သဘောကျကြတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဆီမှာ ဝယ်နေကြ၊ အားပေးနေကြ ဖောက်သည်တွေကို နာမည်နဲ့တကွ သေချာမှတ်ထားတာ၊ သူရဲ့ အကြိုက်တွေ၊ ၀ယ်ယူတတ်တဲ့ပုံစံတွေ မှတ်ထားတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဝယ်သူကို ဒီလို မမှတ်နိုင်ပေမယ့် ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယအကြိမ်ဝယ်နေတဲ့ ဝယ်သူတွေကိုတော့ ကျိန်းသေ မှတ်ထားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို ဝယ်သူဘက်ကနေ သူနဲ့ ကိုယ် ရင်းနှီးတယ်လို့ ပိုခံစားစေရမှာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ အသိမှတ်ပြု Reward လေးတွေ ပေးသင့်ပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ discount ပေးတာဖြစ်ဖြစ် member card ပေးတာဖြစ်ဖြစ် သူများထက်ပိုတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးရတဲ့အခါ ကိုယ့်ဆီ သူပြန်လာဖို့ အခွင့်လမ်းများတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဝယ်သူတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်တဲ့အခါ သေချာ ထည့်စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေပါ။
ဒီအချက်တွေကို သေချာအသုံးချပြီး ဝယ်သူနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေဗျာ…